Ngabe kuyiqiniso ukufuduka kwamabhizinisi? – Bayede News
Ngenkathi sifunda umlando wokusuka kwamaBhunu eKapa
Elinye lamabhizinisi elikhulukazi kuleli Isithombe: TeamBuilding.co.za
Ngenkathi sifunda umlando wokusuka kwamaBhunu eKapa ebalekela umbuso wamaNgisi uhambo lwaluchazwa njengofuduko ngoba babehamba ngobuningi futhi benenhloso eyodwa, ngezizathu ezifanayo. Uma ubuza noma yimuphi umholi walabo ababefuduka ngaleso sikhathi wawuzothola izizathu ezifanayo. Ngabe kusenzeka yini nanamuhla kube nofuduko? Sekujwayelekile ukuzwa abantu bebabaza isimo esingabagculisi ezweni, bamemeze bathi bayahamba, kodwa abanye basahlezi nanamuhla. Manje sekukhulunywa nangokufuduka kwezinkampani.
Kusukela eminyakeni engaphezudlwana kwamashumi amabili besilokhu sizwa ukuthi abantu bayayishiya iNingizimu Afrika. Ababebuzwa babethi bahamba ngoba bengamethembi uHulumeni oholwa ngaboHlanga ukuthi uzokuba nozinzo. Babechaza uvalo lwabo ngendlela ababazi ngayo aboHlanga nangendlela ababetshelwa ngayo ukuthi aboHlanga akusibo abantu abangethenjwa ekuphatheni izwe umnotho uzinze. Abanye babenovalo lokuthi aboHlanga bazophindisa ingcindezelo ngengcindezelo, kuthi abamhlophe bazithole behlukumezeka futhi bephucwa nalokho abanakho.
Seyiphelile yeva iminyaka engamashumi amabili nesihlanu aboHlanga bephethe uHulumeni, kodwa amukho noyedwa omhlophe oseke waphucwa lokho anakho, noma kuthiwe akakwedlulisele kwaboHlanga ngenkani. Sekuphele iminyaka kukhulunywa ngomhlaba nokubuyiselwa kwawo kwaboHlanga kodwa kuyacaca ukuthi lokho kuyiphuphomini ngoba azikho izingxoxo eziqhubekayo ezikhuluma lokho. Kuyamenyezwa ngako kwenziwe neziqubulo, kodwa lolo daba alukaze luhlalelwe yisigungu lukhulunywe ngokusemthethweni nangokujulile. Kuyacaca ukuthi ukuphucwa kwabantu okungokwabo akusiyo into esezinhlelweni. Pho-ke ngabe labo ababaleka ngoba besaba ukuphucwa babeqinisile?
Selokhu kwaqala ukubusa uHulumeni oholwa ngaboHlanga zandile izinkulumo zabantu namabhizinisi ashiyayo kuleli lizwe. Okunye kuyaye kubonakale njengeqiniso kanti kwesinye isikhathi kusuke kushaywa ihawu lengulube. Ihawu lengulube liyinkinga-ke ngoba ligcina ngokufaka uvalo kubantu bazibone behlezi ezweni eliwedlula wonke ngobubi. Kuyiqiniso ukuthi isimo somnotho sibi kulesi sikhathi, futhi singamenza umuntu onelinye ikhaya abuyele kulo.
Esinye sezizinda esihlaziya izindaba zamabhizinisi, iSakeliga senze ucwaningo oluveza isimo samabhizinisi aseNingizimu Afrika kulesi sikhathi. Imiphumela yocwaningo ithi:
Kulabo abaphendula kulolu cwaningo abangama-84% babona isimo sepolitiki yeNingizimu Afrika sisibi kakhulu uma siqhathaniswa neseminyaka emithathu edlule.
Abangama-25% sebemi ngamazonzwane bemisa ngomumo amabhizinisi abo ukuba ahambisane nokusebenza emazweni aphesheya.
Abangama-21% baphezu kwezinhlelo zokubhalisa izingxenye zezinkampani zabo zihambisane nemithetho kanye nezidingo zamazwe aphesheya.
Lokhu abeSakeliga bakuhumusha ngokuthi osomabhizinisi basezinhlelweni zokufuduka baye kwamanye amazwe ngenxa yesimo abasibona singazinzile sepolitiki. Isithombe esakhiwa yilabo abahumusha imiphumela yalolu cwaningo iveza ipolitiki enobungozi ngendlela izwe eliphethwe ngayo.
Kunabo ubuhle ukulungisa izimfanelo zokuhweba kwamanye amazwe ngaphandle kwezwe lakho ngisho ungaqondile ukufuduka. Izinkampani ziyazilungiselela ukuvula amabhizinisi kwamanye amazwe, noma ukusebenzisana nezinkampani ezikulawo mazwe. Kuwuphawu lokukhula kwebhizinisi. Kuleli lizwe sinazo izinkampani ezidabuka kwamanye amazwe esezisebenza kuleli lizwe.
Akukho okuvimba amabhizinisi aseNingizimu Afrika ukuba avule izikhungo zokusebenza kwamanye amazwe. Kuyinto enhle ekhombisa ukukhula kwebhizinisi.
Eminyakeni yobandlululo zikhona izinkampani ezashiya kuleli zaphindela emazweni aphesheya. IBarclays ngelinye lamaBhange ashiya ngesikhathi sakudala ngesizathu sonswinyo. Libuye kule minyaka selisebenzisana namabhange athile lingasazimele lodwa. Inkampani ekhiqiza ubhiya iSouth African Breweries yadayiswa yathengwa yinkampani yaseGermany i-Anheuser-Busch InBev. Kuyinto enhle netusekayo futhi kuletha isithunzi ezweni uma izinkampani ezihlonishwayo nezinkulu njengoSA Breweries zingashiyi ziye kwamanye amazwe.
Izinkampani eziningi zibeka imibandela ethile eyenza kube lukhuni ukusebenza ibhizinisi eNingizimu Afrika. Ezinye izinkampani zikhala ngokubiza kukagesi osetshenziswa ukuhambisa imishini enhlobonhlobo. Ugesi waseNingizimu Afrika waziwa njengobiza ngokwedlulele, futhi ongesinye sezizathu ezingenza amabhizinisi awe noma afuduke.
Okunye okubonakala kuyinkinga enkulu wukungabi bikho kwezinhlelo eziqinile ezikhuthaza osomabhizinisi ukuba bahlale bakhululeke kuleli lizwe. Isimo sokusebenza ibhizinisi siya ngokushuba lapha kuleli lizwe lapho ubuka ukwenyuka kwentela; ukwenyuka kukaphethroli nodizili; ukungabikho kwezinhlelo ezisheshayo zokukhuthaza ukusungula ibhizinisi; ubugebengu nokunye okuletha uvalo kulabo abakhulisa amabhizinisi.
Kuyadingeka uHulumeni angenelele kwesinye isikhathi ngokuxhasa izinhlelo ezithile zebhizinisi. UMnyango weZohwebo Nezimboni unezinhlelo ezahlukahlukene ezisiza izinkampani ezikhiqizayo. Into ethanda ukuba yinkinga engaxazululeki kalula yisimo sepolitiki neziteleka. Lokhu kungenza izinkampani kungabi lula kuzo ukuhamba eNingizimu Afrika.
Uma wazalelwa kuleli akusiyo into elula ukuthatha isinqumo sokuthatha konke onakho uye kokuba yisakhamuzi selinye ilizwe. Uma unezinto eziyigugu zenani eliphezulu, osebenze kakhulu ukuzakha, uzithola udinga ukuzicabangela, uma unokuzibeka kwenye indawo ephephile ukuze zihlale zikhona.
Uma kuyibhizinisi elikhulu ukuhamba kwebhizinisi kushiya isikhala kulelo lizwe elisuka kulo ngoba kusuke kuhamba amathuba emisebenzi.